Archlinux ကိုသွင်းပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ Linux မှ
Archlinux ကို install ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
ရေခဲ | | ဖြန့်ဝေ, GNU / Linux များ, အခြား, သင်ခန်းစာများ / လက်စွဲ / သိကောင်းစရာများ, အတော်ကြာ
Archlinux ကို install လုပ်ပြီးနောက်ငါထည့်လိုက်တဲ့ package တွေအားလုံးကိုပြသဖို့ငါ့အတွေ့အကြုံကထွက်သွားတယ်။ ငါရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြချင်တယ်၊ အဲဒါကငါ 64-bit ဗိသုကာကိုသုံးတာပါပဲ။ အဲဒီမှာအသုံးချနိုင်မယ့် package တွေရှိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အခြေခံအားဖြင့်တော့ငါနောက်မှထွက်သွားတော့မယ်။
messenger ဝန်ဆောင်မှု Skype ကို
Torrent မန်နေဂျာ: ရေနံချောင်း
Download manager: JDownloader ပါ
ဝဘ်လမ်းညွှန်: (ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံး Firefox ကိုရွေးချယ်သည်)
Android ကိရိယာများ - Apktool, Adb, Aapt, Fastboot စသည်တို့
Nemo / Nautilus မှ compressed ဖိုင်များနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှု:
အလွန်စိတ်ကြိုက် terminal ကို: Tilda
ကျွန်ုပ်တို့၏ဖုန်းကို ဆက်သွယ်၍ စီမံရန်အတွက် MTP ကို
Imagen အယ်ဒီတာ: GIMP
ဗွီဒီယိုတည်းဖြတ်သူ - ဖွင့်လှစ်
မျက်နှာပြင်ရိုက်ကူးခြင်း - SimpleScreenRecorder
တေးဂီတဖွင့်စက်: ကရဲ ​​/ Spotify
စာသားတည်းဖြတ်သူ - Gedit
HTML အယ်ဒီတာ: Bluefish / သူတော်ကောင်းတရား - စာသား ၃
operating systems ၏အတုယူ: VirtualBox
Console emulators: Zsnes / Gens-gs / Plasytation / Nintendo64
Joystick ပြင်ဆင်မှု: Jstest-gtk (ကျွန်ုပ်သည် PS2 pad ကတည်းကကျွန်ုပ်ကိုများစွာကူညီသည်)
terminal ထဲရှိစနစ်အချက်အလက်ကိုကြည့်ခြင်း နေ
ခေါင်းစဉ်များ / အိုင်ကွန်များ / ထောက်ပြသူများ:
SDDM အတွက်အခင်းအကျင်းများ - installation လမ်းညွှန်၌ဤ session manager ကိုအသုံးပြုသည်ဟုကျွန်ုပ်ပြောခဲ့သောကြောင့်၎င်းကိုသင်ခန်းစာအချို့ကိုတင်ရန်သင်ခန်းစာအချို့နှင့်လျှောက်လွှာတစ်ခုကိုလည်းထားခဲ့သည်။
သစ်ကြံပိုးခေါက်များ ငါ Numix xD ရဲ့ကြီးမားတဲ့ပန်ကာပါ
ကောင်းပြီ၊ အခြေခံအားဖြင့်ဒီဟာကကျွန်တော်အခုထည့်သွင်းလိုက်တဲ့အရာကဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွေကိုကောင်းကောင်းရေတွက်နိုင်တယ်။ သစ်ကြံပိုး၊ xfce4၊ သစ္စာဉာဏ်အလင်း၊ အိမ်ထောင်ဖက်နဲ့ gnome-shell ။ ငါသစ်ကြံပိုးကိုသုံးတယ်၊ အဲဒါနဲ့အလုပ်လုပ်ရတာပြီးပြည့်စုံပုံရတယ်။ ငါလိုချင်တဲ့အရာအားလုံးရှိတယ်။
သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော application များကိုမျှဝေလိုပါကကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့်ဒေတာဘေ့စ်ကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးကျွန်ုပ်အနေဖြင့်အရာရာတိုင်းကိုလက်လှမ်းမီစွာအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေရန်ပြင်ဆင်ခြင်းကိုပြုလုပ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » ဖြန့်ဝေ » Archlinux ကို install ပြီးနောက်ဘာလုပ်ရမလဲ
Alejandro TorMar ဟုသူကပြောသည်
ငါတပ်ဆင်ပြီး virtual machine တွင်စမ်းသပ်မည်၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံကိုမျှဝေမည်ဖြစ်လိမ့်မည်
Alejandro TorMar အားပြန်ကြားပါ
ဂျိုးဇက်မီတာ ဖာနန်ဒို ဟုသူကပြောသည်
josep m အားပြန်လည်စစ်ဆေးပါ။ ဖာနန်ဒို
နှင့်? ပြtheနာကဘာလဲ၊ ငါသုံးတာကငါ့အတွက်ပြီးပြည့်စုံတယ်။ 😉 neeeeeeeext ။
@ice သင်၏သတင်းအချက်အလက်အတွက်သင်မသိသောကိစ္စတွင်တုန့်ပြန်ရန်နည်းလမ်းများရှိသည်။ သင်အလွန်ရိုင်းရိုင်းစိုင်းစိုင်းဆက်ဆံသည်ကိုသံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ သူတို့သည်မှတ်ချက်တစ်ခုပေးပြီး COPPER ကိုပြခြင်းဖြင့်သင်တုန့်ပြန်သည်။
ဤတုံ့ပြန်မှုအမျိုးအစားများကိုသတိထားပါ၊ သင်အနည်းငယ်သာယာပြီးရိုင်းပျမှုနည်းနိုင်သည်။ ဤမှတ်ချက်အမျိုးအစားများကိုအသင့်အတင့်ထားသင့်သည်။
DL ပိုင်ရှင်တွေပြောင်းလဲလာတာနဲ့အမျှကျွန်တော်ဟာထုတ်ဝေတဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသံသယဝင်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမယ့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရာမှာရှိနေဆဲပါ။ ဤထင်မြင်ချက်သည်ဘလော့ဂ်ကောင်းတစ်ခု၏ဂုဏ်သတင်းကိုညစ်ညမ်းစေပါသည် (အဓိကအားဖြင့်သူသည် troll မှမဟုတ်ဘဲ post ၏ရေးသားသူကိုယ်တိုင်မှဖြစ်လျှင်) ထို့ကြောင့်ဤအထူးမှတ်ချက်ကြောင့်သူသည်ရပ်ရွာထဲတွင်ဆက်လက်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုလိုပါ။ ကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး ကျွန်တော့်ကိုရင်းရင်းနှီးနှီးနှုတ်ဆက်သည်။
linux kernel ထဲမှာသူ့ဟာသူအခမဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေပါဝင်တယ် ...
ကောင်းပြီ၊ ယခုဒေါ်လာသန်းနှင့်ချီသောမေးခွန်း (အနည်းဆုံးကျွန်ုပ်အတွက်) torrent အမျိုးအနွယ်ကိုမည်သို့ download လုပ်ရမည်နည်း။ သင်အသုံးပြုလိုသော interface အမျိုးအစားကိုမည်သည့်နေရာတွင်ရွေးချယ်သနည်းသို့မဟုတ်၎င်းကိုကိုယ်တိုင်ထည့်သွင်းရန်လိုအပ်ပါသလား။ ကျွန်ုပ်သည် 600mg အလေးချိန်ရှိသောပုံကိုကူးယူပြီးပါပြီ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားထည့်သွင်းရန်မဟုတ်ဘဲခလုတ်ခုံသို့ပို့ဆောင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်ဘာလုပ်ရမည်နည်း။
eg ။ ။ ဟုသူကပြောသည်
Arch Linux သည်သုံးစွဲသူများအတွက်မဟုတ်ပါ။ ဒါပေမယ့် VirtualBox ထဲမှာ install လုပ်မယ်လို့ပြောရင်မင်းကအဆင့်မြင့်ပြီးပြီလို့ငါထင်လိမ့်မယ်။
Arch Linux ပုံကသင့်ကို console ထဲမှာထားပေးတယ်။ setup program မရှိပါ။ ငါမှာအချိန်ကြာမြင့်စွာ installation script တစ်ခုရှိခဲ့တယ်၊ Arch wiki ကိုယ်တိုင်တွင်ဖော်ပြထားသောအဆင့်များကိုသင်လိုက်နာရမည်။ သို့မဟုတ်လူသစ်လမ်းညွှန် - https://wiki.archlinux.org/index.php/Beginners''လမ်းညွှန်% 28Espa% C3% B1ol% 29 (သို့) Installation လမ်းညွှန်: https://wiki.archlinux.org/index.php/Installation_guide_%28Espa%C3%B1ol%29
Virtual Box တွင်ရှိနေစဉ် VirtualBox နှင့် Arch Linux recommendations ည့်လမ်းညွှန်များကိုလည်းကြည့်ပါ။ https://wiki.archlinux.org/index.php/VirtualBox_%28Espa%C3%B1ol%29#Pasos_para_instalar_Arch_Linux_como_sistema_hu.C3.A9sped
ပထမတော့ခင်ဗျားအတွက်ရှုပ်ထွေးပုံရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်၊ ဒါပေမယ့်အားသာချက်ကတော့မင်းမှာလိုအပ်တဲ့အရာတွေနဲ့စိတ်ကြိုက်စနစ်တစ်ခုပဲရှိမယ်။ 100% ကိုတခြားအရာဝတ္ထုတွေလိုပဲ composit လုပ်စရာမလိုပဲ။
ဒီ ISO ကိုကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ၎င်းသည် installer အဟောင်းနှင့်အရာအားလုံးကိုလုပ်သည် http://sourceforge.net/projects/architect-linux/ Desktop ပတ် ၀ န်းကျင်အားလုံးနီးပါးကိုတပ်ဆင်သည်
ငါမင်းရဲ့မေးခွန်းကိုကောင်းကောင်းနားမလည်ခဲ့ဘူး ... qbittorrent ကို download လုပ်တယ်။ ဥပမာ arlinux2015.iso.torrent, link ကိုအောက်မှာငါ qbittorrent နဲ့ဖွင့်လိုက်တယ်။ အဲဒါက download စတင်နေပြီ voila, ငါတခြားဘာမှမလုပ်ဘူး။ 🙂
လူး TO သို့ ဟုသူကပြောသည်
မင်းရဲ့ ubuntu က
လူးဝစ်ကိုပြန်ပြောပါ TO သို့
ထပ်ဆောင်း repository တစ်ခုနှင့်အတူ Antergos ကိုပိုမိုမြန်ဆန်စွာ install လုပ်သည်မဟုတ်လော။
Miguel Mayol ဟုသူကပြောသည်
yaourt -S ခရိုမီယမ် - ငရုတ်ကောင်း - flash ကို
ယင်းသည် GNU / Linux အတွက်လွန်ခဲ့သောအချိန်ကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုရပ်တန့်စေသော Adobe ဗားရှင်းထက်ပိုမိုခေတ်မီသည်
Miguel Mayol အားပြန်ပြောပါ
ဒီနေ့ဒီဇင်ဘာအထိဒီစနစ်ကရက်အနည်းငယ်လောက်သတိပေးနေတဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာပဲငါ KDE5ကို update လုပ်ခဲ့တယ်။
သင့်ရဲ့ post ကိုထည့်သွင်းခြင်း, ငါတ ဦး တည်းအတွက်သူတို့အားခြေလှမ်းများကျော်သွားလိမ့်မယ်။ Retroarch ကို install လုပ်ပါ။ SNES, N64, MAME စသည့်စနစ်များမှသင်စိတ်ဝင်စားသော cores များကို download လုပ်ပါ။
အိုးကောင်းတယ် !!! နေ့စဉ်နေ့တိုင်းသင်သည်အသစ်သောအရာတစ်ခုကိုသင်ယူတတ်သည်။ 🙂
ဘာကြောင့်ပရိုဂရမ်များကို root User အောက်တွင် install လုပ်သနည်း။ မင်းအနားကနေအသက်ရှင်ချင်တယ်။
သငျသညျရှင်းရှင်းလင်းလင်း root အကောင့်ထဲမှာမရှိကြပေ။ သင်က sudo su ဟူသော command ကိုသုံးပြီး pacman ထဲတွင် "sudo" ကိုထည့်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်အစွန်း၌မနေပါ၊ ၎င်းသည်အနည်းငယ်အသက်ရှင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါအစွန်းမှာနေချင်တယ်၊ ငါဘီယာအနည်းငယ်သောက်တယ်၊ ငါ xD root လားဆိုတာကိုတော့မပြောတတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါ sudo ဒါမှမဟုတ်တစ်ခါတစ်လေ su … hehehe
Rescatux သည်သင်၏ system ကိုအမြဲတမ်းကယ်တင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်
Rekoobe: Tux ရဲ့မဟာရန်သူ Trojan အသစ်။